Iflethi okanye indlu ekwicomplex esesixekweni - Iziko lesixeko sase - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex esesixekweni - Iziko lesixeko sase
Iflethi entle phakathi eArrecife, ikomkhulu laseLanzarote. Yonke into kwindawo yokuphosa amatye kuquka iivenkile, iivenkile zekofu, iibhari, iivenkile zokutyela, iikhemikali, iivenkile ezinkulu kunye nezinye ezininzi.
Le flethi inazo zonke iinkcukacha ezincinci onokuzilindela ekhayeni lakho, kunye nendawo yokutyela elangeni esemazantsi, apho unokonwabela ixesha lokuphumla ngaphambi okanye emva kokuzulazula kwizitrato zaloo dolophu, okanye undwendwele enye yeendawo ezininzi zesiqithi kunye neendawo ezinomtsalane. Le flethi ilungele abantu abathandanayo. Kushiyeke nje amanyathelo ambalwa uza kufumana indawo yolonwabo eyaziwayo yase-El Charco de San Ginés, ikhaya leebhari neevenkile zokutyela kunye nonxweme olukuvumela ukuba ufikelele kwiMarina de Arrecife, ngaphandle kwamathandabuzo, enye yezona marinas zintle zeCanary Islands.
Iflethi ikwindawo ephambili yezorhwebo eArrecife. Ukusuka apha, unokufikelela lula kwindawo yoshishino kunye nenxalenye yembali yesi sixeko esikhulu. Sowukufutshane kakhulu, uza kufumana iibhari neevenkile zokutyela ezahlukahlukeneyo ezigudle iCharco de San Ginés kunye nonxweme oludumileyo, kunye neendawo eziphawulekayo ezifana ne-El Almacén, eyona nto iphambili yeCésar Manrique.
Sithanda ukunika iindwendwe zethu inkululeko, nangona kunjalo siyafumaneka ukuba uyasidinga. Ungasithumelela umyalezo ngewebhusayithi ka-Airbnb, ngoWhatsApp okanye usifowunele nje.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Arrecife